Sky Force Reloaded itsva ndege shoot'm up | IPhone nhau
Sky Force Reloaded mutambo wendege umo isu tinofanirwa kuparadza zvese zvatinosangana nazvo munzira. Iyi shoot'em kumusoro inosanganisa zvinhu zvekare zveiyo arcade nemikana mitsva inopihwa neino tekinoroji. Sky Force ichangomhara paApp Store uye iri kurutsoka rwerudyi. Muna 2014, mugadziri wacho akaburitsa Sky Force, yekutanga vhezheni iyo yakawana ongororo dzinoyemurika kubva kuvatambi nemuchina wekudhinda. Iye zvino ivo vachangobva kuburitsa Reloaded vhezheni iyo inotipa isu mamwe manzwiro senge mune yekutanga vhezheni asi ichichinjisa mutambo kune iwo mikana mitsva inopihwa yazvino vhezheni yeIOS 9.
Sky Force Reloaded inotipa inonakidza 3D mifananidzo, ine kumhanya kwakanyanya kwekutamba uye nhamba hombe yezvinyorwa zvitsva zvichienzaniswa neshanduro yapfuura. Iyi vhezheni itsva inotipa nhamba hombe yendege nezvombo zvekusarudza kubva. Tichafanirwa kusunungura fungidziro yedu kuti tinakirwe nayo zvizere, kunyange hazvo mukati me-kutenga kutenga kunogona kukanganisa chiitiko chedu chemitambo zvishoma.
1 Sky Force Reloaded maficha
2 Sky Force Reloaded ruzivo
Sky Force Reloaded maficha
Akanaka mazinga akanyatsogadzwa neakasiyana mamishini kuti apedze.
Hondo dzisingakanganwike nehukuru hwekupedzisira vavengi.
Rudzi rwemakadhi ekuwedzera uye ndege nyowani dzekuunganidza.
Simudzira nhoo, zvombo, zvombo, maga-mabhomba, uye magetsi.
Isa basa iri munjodzi kununura vanhu vasina mhosva.
Wedzera mamaki ako ekupedzisira nekuzadzisa zvinangwa zvemutambo pane akasiyana matambudziko.
Kununura shamwari dzakakundwa kuti dziwane hupenyu hwakawanda uye nyeredzi.
Inowanikwa kune vasina kujaira vatambi, zvinonetsa kune vakaomarara vatambi.
Iwo chaiwo manzwi uye anoshamisa emagetsi rwiyo.
Sky Force Reloaded ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 30-05-2016
Mitauro: Spanish, German, Simplified Chinese, Korean, French, Indonesian, English, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Turkish, and Vietnamese
Compatibility: Inoda iOS 8.1 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Sky Force Reloadedvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Sky Force Reloaded itsva ndege shoot'm kumusoro
Ini ndinoda mutambo uyu, ndinoda kuti ndinokwikwidza sei nevamwe vashandisi mumutambo uyu